Unique English Language Centre (U.E.L.C), Myanmar
U.E.L.C is founded in 2018 by Ms.Aye Chan Moe. U.E.L.C always prior to the brightness of the students. We offer English Language Courses for preschoolers, young learners, adult learners, and Cambridge Exam foundation and preparation. With convinced international teaching methods, highly qualified teachers who received world recognization certificate such as CELTA,TKT, TEFL, TESOL and etc, and international standard curriculum withaglobal perspective , we gurantee you excellent success.
We would like the students to believe that English is not hard to learn and students can speak English confidently not only within the centre.
To achieve our students' goals in life!
Story Telling and Life Skills
Music , Songs and Poems
Learning through game and play based activities.
Jolly English pronunciation and grammar
Young Learner English Proficiency Classes
Regular / Summer English4Skill Classes
Grammar, Letter and Essay Classes
International School Class များဖြစ်သော English Literacy , Science and reading classes
Text- Oriented Class ( Grade-1 to 11)
Cambridge English Foundation and Preparation Classes
Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, IELTS and IGCSE
Teen & Adult Learner English Proficiency Classes
General English ( Zero to Professional)
ECCD & TKT exam preparation training
ခဲ ၊ ရောင်စုံ ၊ ရေဆေး ၊ ပုံတူ ပန်းချီသင်တန်း
ကြိုတင်အပ်နှံသူများ အချိန်ညှိ၍တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်း သီးသန့် တက်ရောက်လိုသူများ ၊ Company လုပ်ငန်းများအတွက် သီးသန့်အတန်းများလည်းရှိပါသည်။
KBZ	: 04430104401198401
MAB	: 0930131093000459013
AYA	: 0102201010018216
CB	: 0021600100140414
WAVE MONEY / KBZ PAY	: 09402594196
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကား သင်ကြားရေးလက်မှတ် ( Cambridge , UK CELTA & TKT ), MA ( English ) , Diploma ဘွဲ့များရ ဆရာမ Tr.Aye Chan Moe ( Tr.Emma ) မှဦးစီးသင်ကြားပေးပါသည်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အင်္ဂလိပ်စာ အသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့များဖြစ်သည့် B.A(English) , M.A (English), TKT, TEFL, TESOL, CELTA အသီးသီး ရရှိထားသည့် ဆရာ ဆရာမများမှ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးသည်။
Cambridge English :YLE Exams
ကလေးငယ်များ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း သတ်မှတ်ပေးသည့် စာမေးပွဲများဖြစ်သော Starters, Movers , Flyers များနှင့် KET / PET / FCE ( for School ) ဖြေဆိုနိုင်သည်အထိ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။
English4Skills Proficiency Classes
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအား အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန် ထိရောက်စွာ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း။
Grammar , Letter & Essay Classes
အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာအသူံးနှုန်း မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Letter & Essay များအား ကိုယ်တိုင်တွေးတတ် ၊ ရေးတတ်စေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။
Teen and Adult English Proficiency Classes
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုပြီးသူများမှစ၍ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နေသူများအတွက် အင်္ဂလိပ်စကားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောတတ်၊ ရေးတတ် ၊ ဖတ်တတ် ၊ နားထောင်တတ်စေရန် နိုင်ငံတကာ သင်ရိုးများဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။
International school ,Private School Subjects များဖြစ်သော English Literacy , Science , and reading အတန်းများတစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ တက်ရောက်နိုင်သည်။
ပန်းချီအနုပညာကို စိတ်ပါဝင်စားသော ကလေး / လူငယ် / လူကြီးများအတွက် ခဲ ၊ ရောင်စုံ ၊ ရေဆေး ပုံတူပန်းချီသင်တန်း
အရည်အသွေးပြည့်မှီသော နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ကစားခြင်း၊ အခြေခံသင်ကြားခြင်းများ
အရည်အချင်းရှိ၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်ဖြင့် သင်ကြားမည့်ဆရာမများ
ကျယ်ဝန်းပြီး သန့်ရှင်း ၊ အေးမြ ၊ သပ်ရပ်သော စာသင်ခန်းများ
အင်္ဂလိပ်စကား ပြောဖြင့် သင်ကြားခြင်း
No.280, C1 , First Floor , Hlaing Station Road and the corner of Yadanar Mon 10th street, Hlaing, Yangon, Myanmar.
No.15/Right, Ground floor, Aye Yeik Mon 4th Street, Hlaing, Yangon.
(+95)940259 4196
(+95)995940 9628
(+95)978107 4453
© 2021 Unique English Language Centre. All Rights Reserved.